Talooyin Waayo Socdaalka Europe Kalidaa By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Talooyin Waayo Socdaalka Europe Kalidaa By tareenka
Safraya Europe tareen waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan, scenic and cultural journeys in the world. Haddii aad raadinayso tareenada si toos ah u dhexeeya magaalooyinka Yurub ugu waaweyn ee sida cusub London si Amsterdam tababar ama aad raadinayso sodcaalladoodii oo ka taataabtay tareenka, safarka tareenka Yurub oo dhan ayaa.
Tirada dadka interrailing iyada oo Europe sannad kasta waa 400,000 dadka. Waxaad booqan kartaa in ka badan 30 countries using interrailing tickets. Tan iyo interrailing bilaabay in 1972, malaayiin dad ah ayaa u safray iyada oo Europe isticmaalaya tigidh this rail hal.
Safrida yurub kula tigidh hal yimaado la faa'iidada iyo khasaaraha ay. Waxaa jira dhowr goobood oo online ka go'an in ay Talooyin u safraya kuwaas oo doonaya in ay arkaan Europe tareen. goobaha waxaa ka mid ah apps qorsheeye waddo iyo websites / blogs in aad bixiyaan talooyin ku saabsan sida loo miisaaniyadda.
Safraya Europe oo keliya
Safraan Europe naftaada by leedahay badan oo ka mid ah faa'iidooyinka. Marka aad naftaada by, aad leedahay dhamaystiran koontarool aad safarka.
In aad keligaa ku siinayaa fursad ay ku go'aansan aad faahfaahin gaar ah oo aad, wax kasta oo cunto aad doonayso inaad cuntaan iyo marka aad rabto oo aad iska ilaaliso inaad dad kale kula murmi karto safarkaaga,
xorriyadda noocan oo kale ah waxay keeni kartaa in ka badan is-daahfurka iyo fursad ay ku kulmaan dad cusub iyo reer guuraa kale, halka naftaada ikhtiraacida. Tani Solo-aragnimo waxay keeni kartaa in is-koritaanka.
Dortmund inay Tareenadu Hanover
Essen in Tareenadu Hanover
Bonn in Tareenadu Hanover
Luxembourg in Tareenadu Hanover
isagoo saaxiib marka aad u safarto, ku siinayaa qof in ay xasuus aad la wadaagto, Taas oo qayb weyn ka mid ah Safraan Europe.
Marka Safraan Europe oo keliya isku dayaan in ay sii joogo hostels.
Hostels waxaa ka buuxsamay dadka Solo Safraan Europe, Sidaas bulsho oo la kulmo dadka.
Isku day inaad sida saaxiibtinimo iyo xilka ee aad awoodo markay keli u safraya iyo Haddii aad tahay qof habacsan, waxaad u baahan doontaa in ay ku riday dadaal dheeraad ah si ay u noqon saaxiibtinimo socdaalayaasha kale. Waxay qaadan kartaa dhowr maalmood in loo isticmaalaa in lagu in ay ka badan furan iyo saaxiibtinimo, laakiin waxa ay noqon doontaa qiimihiisu waqti aad sida aad bilowdo si ay u horumariyaan xidhiidhada la safra la shaqayn jiray.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la kariyo cuntada ee hostel, kaas oo ku siin doona fursado badan la dhaqanka dadka kale.
Haddii aad ku badan yihiin ee shirka dadka deegaanka ka badan safra kale, markaas Couchsurfing ayaana ah wado kuu fiican.
Couchsurfing, oo ay ku jiraan meetups u gaar ah ee baararka iyo masraxyada kugu xiri doona dhaqanka maxalliga ah iyo sidoo kale fursad ay kula kulmaan khubarro.
Waxaa jira qaar ka mid ah magaalooyinka Yurub, halkaas oo ay jiraan wax badan oo pickpockets iyo noocyada kale ee dambiileyaal aan laga yaabaa in la raadinaya in ay qaataan Faa'iidada dalxiisayaasha, Isticmaal dareen caadi ah u gaar ah iyo sidoo kale ka akhrisan forums safarka ama macluumaadka kale ee la xiriira si aad u aragto meelaha iyo dadka in ay ka fogaadaan.
Si aad u ogaato qiimaha ugu wanaagsan ee ay ku safraan login Europe in our website hadda. qaado 3 daqiiqo si ay u dhamaystiraan jaale tigidhada tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-for-traveling-europe-alone-by-train/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in si / fr ama / iyo luuqado badan.
#nomad tareen safarka traveltips